Inwe ebe nrụọrụ intaneti pụtara ìhè ga-enye gị ndepụta na-enweghị njedebe nke ohere ị ga-enwe ọganihu na kọmputa ụwa. Kpọmkwem ma ọ bụrụ na ị lekwasịrị anya na saịtị weebụ okporo ụzọ, ị nwere ike ịchọta na ị nwere ike ime karịa karịa naanị ịkpọsa na ịre ahịa na ịnyekwa ọrụ nke aka gị iji kpuchido ego na-enweta mgbe niile.
Ndị enyi na-atụ anya ka ị na-achụ gị yana kwadebe ịmekọrịta ọtụtụ njikọ dị ka ndị na-ere ahịa n'ịntanetị ga-eme ike ha niile igosipụta ụlọ ọrụ ha site na ibe weebụ gị (kpachara anya ka ị ghara iso onye na-agba akaebe).
Kedu ihe kpatara ị ga - eji debe ndị elebara anya ma ọ bụrụ na echekwara weebụsaịtị gị na ebe nrụọrụ weebụ gị?
O doro anya, gị ezubere iche website okporo ụzọ bụ ihe nwekwara ike-ezubere iche ka ha ahịa ma ọ bụ nka. Ọ bụrụ na, dị ka ihe atụ, ebe nrụọrụ weebụ gị na-enye njikọ weebụ dị elu, mgbe nke ahụ gasịrị, okporo ụzọ weebụ gị nwere ike igosipụta ezigbo uru na ndị otu na-azụ ahịa spyware. Onye ọ bụla nke na-eji ụgbụ ahụ nọ n'ihe ize ndụ nke ịbanye na nzuzo nke onye ọ bụla n'ihi mmemme ndị nwere ike itinye na kọmputa gị n'amaghị ama.
Onye obula nke choro uzo net nwere ike iburu n'uche nnweta nke spyware. Nke a bụ ebe ebe ị na-ahụ maka ebe nrụọrụ weebụ ị na-eche na ọ ga-abụ ihe dị egwu maka ụlọ ọrụ ndị ọzọ dị mkpa (kpọmkwem maka ndị na-ama gị aka - nke bụ ihe mere ị ga-eji chọọ mgbe niile na saịtị gị nwere ikike nyocha ntanetị iji nweta okporo ụzọ weebụsaịtị wepụrụ) .
GỤRỤ AHỤ Ups na Downs Of Ọbịa ịde blọgụ - Mara Otú O Si Enyere Gị ...
Ikike a gafere ihe ọ bụla na - egosi na saịtị gị nke nwere ike ịpị ndị ọbịa gị na saịtị ahụ. Mgbe otu ụlọ ọrụ aha na-agbazinye mpaghara n'ime ụlọ ahịa, ụlọ ọrụ aha nwere ike irite uru site na mkpesa nke ndị ikpeazụ.
Nke a dị ka tụnyere onye otu na-azụta mpaghara ma ọ bụ na-agbazinye ego na weebụsaịtị gị ọ bụla. O doro anya na nzukọ a ga-agbachitere mpaghara n'ime ụlọ ahịa ma ọ bụghị maka nnukwu ọhụụ ọ na-ahụ kwa ụbọchị. Mgbe ọ bịara na saịtị gị, na-enweghị ebe nrụọrụ weebụ ezubere iche nke nwere ike ịbụ n'ihi ọdịnaya weebụ dị njọ, ị nweghị ike ịbụ onye ikike yana yabụ na ị gaghị ejide ụdị mmasị ọ bụla.
Ebe nrụọrụ weebụ na-enweta okporo ụzọ weebụsaịtị nwere ike ịnweta ohere ị ga-achịkọta ozi gbasara ndị ọbịa ya. Might nwere ike ịnye ndị ọbịa na saịtị gị nhọrọ ịdebanye aha na weebụsaịtị gị site na ịnweta adreesị ozi-e (ma ọ bụ ikekwe biputere adreesị yana nọmba ịkpọtụrụ) yabụ ị nwere ike izigara ha ọkwa mgbe ọ bụla mmepe na weebụsaịtị gị na-eme.
Nkọwa ndị a, ma e wezụga ịbụ ezigbo ụlọ ọrụ gị, ga-aba uru na ndị enyi. Enwere ike iji nlele ahụ maka ụlọ ndepụta, ahịa dị nro, yana ọrụ mgbasa ozi ndị ọzọ metụtara. Kpachara anya na mmachi a kapịrị ọnụ na-akpọ ndu ndị ga-ekwe omume.
Nakwa site na nanị ịnọ na ebe nrụọrụ weebụ na nnukwu okporo ụzọ weebụ a na-eche ugbu a na-eweta abamuru nke ndị enyi na-elebara ogo nke weebụsaịtị ha anya. Njikọ njikọ dị ezigbo mkpa tụlee inweta saịtị kachasị. Inwe ha sitere na ebe nrụọrụ weebụ a tụkwasịrị obi bụ ihe dị ịrịba ama iji weta ududo ududo nchọta ịntanetị.
Ihe ezubere iche maka ebe nrụọrụ weebụ ị nwere bụ ihe ga - eme ka websaịtị gị bụrụ ntụkwasị obi.
Inwe saịtị dị egwu ga - enye gị ohere ị ga - enwe njedebe zuru ụwa ọnụ na ntanetị. Kpọsị ma ọ bụrụ na ịchọrọ n'ezie maka ịzụ ahịa weebụ, ị nwere ike ịchọpụta na ị nwere ike ime karịa karịa naanị ịkpọsa ma nyekwa nzukọ gị iji chebe nkwụnye ego na-akwụ ụgwọ.
Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ebe nrụọrụ weebụ gị na-eji njikọ weebụ dị elu, mgbe nke ahụ gachara na ebe nrụọrụ weebụ gị nwere ike igosi ndị enyi na-enye mgbochi spyware uru. Banyere ebe nrụọrụ weebụ gị, na-enweghị okporo ụzọ weebụ a ezubere iche bụ nke nwere ike ịbụ n'ihi ihe ọjọọ, ị nweghị ike ịbụ onye ikike yana n'ihi nke a, ị gaghị enwe ike ijide ụdị mkpakọrịta ọ bụla.
Nakwa site na njikọ naanị na saịtị nwere nnukwu okporo ụzọ weebụsaịtị wepụtara uru ugbu a na-eweta uru na ndị otu na ibe ya iji bulie ogo nke weebụsaịtị ha.